Indraindray aza tahaka ny zanak’ondry bonaika (אַלּוּף allof = folaka, animal apprivoisé) hoy i Jeremia ireny olomarina ireny, ka tsy mahalala izay hahafaty azy akory. Ny teny malefaka sy ny fihatsaram-belatsihy no entin’ny mpanao ratsy avy eo hamongotra azy hatramin’ny voany, tsy ho ety an-tanin’ny velona intsony. Tsy izany anefa no hanakana antsika tsy hanao soa sanatria. Eo ny mety ho fahadisoam-panantenana, izay matetika mampikafara fa tsy ho voan’ny mpamitaka amin’ny lainga tsara lahatra intsony, ary mety ho tonga hatramin’ny fanidiana ny fo mihitsy aza ka tsy hatoky na iza na iza intsony amin’ny manaraka. Mazava anefa ny torohevitry ny Mpaminany. Tsy hiasa saina amin’izany fa hanankina ny zavatra rehetra (ady) amin’Andriamanitra izay mamantatra ny voa, (כִּלְיָה kil’yah, siège de l’emotion et d’affection: ny fihetseham-po) sy ny fo (לֵב leb, l’homme interieur: ny atifo, mandray ny fanampahan-kevitra lalina). Tsy sakana tsy hanaovan-tsoa ny haratsiam-pon’ny sasany.